Talata 22A (Lk 4, 31-37) 01/09/2020 | FKMP
Talata 22A (Lk 4, 31-37) 01/09/2020
“Ary nidina tany Kafarnaoma tanànan’i Galilea izy, ka nampianatra ny olona tamin’ny sabata, ary gaga ny olona tamin’ny fampianarany, satria niteny toy ny manam-pahefana izy. Tao amin’ny sinagoga dia nisy lehilahy azon’ny demony maloto, ka niantso mafy nanao hoe: Aoka re, fa mifandraharaha inona aminao izahay, ry Jesoa avy any Nazareta ô? Tonga handringana anay va hianao? Fantatro raha hianao, dia ilay Masin’Andriamanitra. Fa notenenin’i Jesoa mafy izy nataony hoe: Mangina, ary mialà amin’io lehilahy io. Dia nandavo azy tamin’ny tany teo afovoan’ny olona teo ny demony vao nivoaka niala taminy, nefa tsy nandratra azy akory. Talanjona izy rehetra, ka nifampilaza hoe: Teny manao ahoana re izany? fa mandidy ny fanahy maloto amin-kery sy fahefana izy, dia miala ireny. Ary niely tamin’izany tany rehetra izany ny lazany.”
Amin’ izao vanin’andro hiainantsika izao ary eto amin’ny fiaraha-monina misy antsika , indrindra aty amin’ny tany “mandroso”, dia hafahafa ny fijerin’ny olona raha miresaka ny devoly sy ny asa ratsiny. Misy ireo izay tsy mino hoe misy ny devoly. Misy koa anefa ireo izay mahita ny herin’ny maizina na inona na inona hataony na aiza na aiza misy azy. Ny tian’ny devoly sy ny tanjony dia ny hisarahantsika amin’Andriamanitra, ny hahavery fanantenana sy ny fahatokisana amin’ny fiainantsika isan’andro.
Tsy mahery nohon’ny Tompo anefa ny devoly ary fantany izany, voamarina tokoa izany eto amin ity evanjely ity : “ Aoka re, fa mifandraharaha inona aminao izahay, ry Jesoa avy any Nazareta ô? Tonga handringana anay va hianao? Fantatro raha hianao, dia ilay Masin’Andriamanitra”.Jesoa zanak’ Andriamanitra dia nanonona teny tokana iray monja dia lasa ny demony. Gaga ny vahoaka nahita izany , talanjona tokoa. Zava-dehibe no lazain’ny evanjely anio satria hita porofo fa resy ny fanahy ratsy ary Jesoa dia Ilay Mpandresy Lalandava .
Eo amin’ny fiainantsika mba handresena ny fakam-panahy sy ny asan’i Satana dia aoka isika hiantso ary hanaiky an’I Jesoa ho Manda , Miaro sy Miahy antsika.Tsy vitantsika ny miady irery amin’ny asan’ny ratsy, tsy haharitra ela isika fa ho lavo. Ambom-po diso toerana ny miady irery amin’i Satana sy ny asa ratsiny.
Ny fangatahana ny fiarovan’ny Tompo, ny fanankinana ny fiainantsika amin’i Jesoa, ny Vavaka no ahafahantsika mandresy ny asan’ny maizina. Fandresena miaraka amin’ny Tompo no tena Fandresena ary Fandresena lehibe tokoa. Aoka ary tsy ho hadinontsika izany fa hifantoka ao an-tsaintsika mandrakariva .
Previous Post: Alarobia 4A Paka (Jo 12,44-50) 06/05/2020
Next Post: Alarobia 22A (Lk 4,38-44) 02/09/2020